Nevşehir Devlet Hastanesi Ambulansına Tren Çarptı | RayHaber
Homeụgbọ okporo ígwèUsoro okporo ụzọ okporo ụzọỤlọ Ọgwụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọgwụ na Nevsehir State
Ụlọ Ọgwụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọgwụ na Nevsehir State
01 / 02 / 2018 Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Turkey
Ambulance Nevsehir State Hospital, Niğde na-arịa ọrịa mgbe ọ na-agafe ụgbọ okporo ígwè kụrụ ọkwa ịgafe.
Zọ mgbochi gafere na Niğde na-akpọ ọdachi ahụ. Fọdụ ndị ọkwọ ụgbọala na-anwa ịgafe oghere dị n'etiti ha wee nwụọ site na imi. Ọ bụ ya mere ihe mberede ikpeazụ mere na mgbede ụnyaahụ na-ekwu na ọ mere. Dika ozi enwetara, Nevsehir State Hospital Rebian team ambulance ka ha na-agafe ije n'ihi ụgbọ okporo ígwè na Nigde enweela njem. Ọ dabara nke ọma, ndị otu ahụike na ụgbọ ihe mberede na onye ọrịa butere ihe mberede ahụ ntakịrị. Anyi nwere olile anya na ikwughachi adighi eme.
N'aka nke ọzọ, usoro ihe ngosi ihe nkiri a na-eji na ngaghari larịị na Old Industrial Mpaghara dị na Ni causesde na-eme ka mmeghachi omume nke ndị ahụ na-ebu agha. Usoro mgbochi, nke dị mkpụmkpụ karịa ka o kwesịrị ịdị, na-enye ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala ka ha jiri ọkwa dị larịị na-etinye ndụ ha n'ihe ize ndụ n'agbanyeghị ọnwụ. Citizensmụ amaala, a na-emeghe usoro ihe ọghọm site na ịkpọ oku na njedebe nke usoro a chọrọ ịtọ mgbochi dịka ụkpụrụ.
Isi: m www.fibhaber.co
Na-azụ na Poland ka taya na-agba ụkwụ na ụgbọ ala
Ụgbọ njem gaa Ụlọ Ọgwụ Ọchịchị Seka
Aybọchị NUMlọ Ọgwụ Caycuma State Funicular 27 Day 14 puku…
Nevşehir-Antalya Ụgbọ njem ụgbọ oloko ngwa ngwa malitere ịdaba
Nevşehir gafere 1 bụghị 2 ọsọ ụgbọ oloko dị elu
Prime Minista nyere Ozi Ọma! Traingbọ oloko dị elu na Nevsehir…
Tram Na-edozi Nsogbu Nsogbu nke Nevsehir
Nevsehir "usoro okporo ụzọ obodo" bụ ihe dị mkpa
Maka Linegbọ okporo ígwè Belsin-Şehir…
Ụzọ Ọhụrụ n'Ụlọ Ọgwụ nke Bilkent City
3 dị iche na tebụl maka Transportgbọ njem Ọgwụ na Bursa City…
CHP ga-aga Congress na Eastern Express